Robert Mugabe oo dhintay – Hareerley News
Robert Mugabe oo dhintay
Robert Mugabe, wuxuu ahaa 95 sano jir, wuxuuna xilka wareejiyay sannad ka hor.
Wuxuu u dhintay xannuun muddo hayay, sida ay qoyskiisa BBC u xaqiijiyeen.
Mr Mugabe waxaa xilka looga qaaday afgembi militari bishii November ee sannadkii 2017-kii, taas oo soo afjartay xukunkiisii socday in ka badan 30 sano.
Wasiirka waxbarashada Zimbabawe Fadzayi Mahere ayaa Twitter-ka ku qoray “nabad ku naso Robert Mugabe.”
Wuxuu dhashay 21-kii February 1924, xilligaas oo Zimbabawe loo garanayay Rhodesia.
Wuxuu xabsi ku jiray in ka badan 10 sano ka dib markii uu eedeeyay dowladdii Gumeystaha ee Rhodesia, sannadkii 1964-tii.
Sannadkii 1973, isagoo xabsi ku jira ayaa loo doortay madaxweynaha xisbiga Zanu ee Zimbabawe kaas oo uu ka mid ahaa aasaasayaashiisa.
Sooyaalka Mugabe oo kooban
1924 ayuu Dhashay
1964: waxaa xabsi galiyay dowladdii gumeysiga ee Rhodesian
1980: Wuxuu ku guuleystay doorashooyinkii dhacay xornimada ka dib
2000: Wuxuu ku guuldaraystay afti, kadib ciidamo taabacsan ayaa weeraray beeraha caddaanka.
2008: Kaalinta labaad ayuu galay doorashooyinkii guud ee dhacay
2017: Waxaa xilkii ka qaaday madaxweyne ku xigeenkiisii Emmerson Mnangagwa iyo militariga
Wiil uu dhalay Maxamed Siyaad Barre oo ku geeriyooday Dalka Cuman….
Wararka ka imanaya Dalka Cumaan ayaa sheegaya in dalkaas uu ku geeriyooday Xasan Maxamed Siyaad Barre. Xasan waxaa uu ahaa safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhin jiray Dalka Cumaan,waxaana uu sidoo kale ahaa mid ka mid ah wiilashada Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. Waxaa uu Xasan ku geeriyooday maanta caasimadda dalka Cumaan Masqad,waxaana […]
Guddiga diyaarinta Sharciga Doorashooyinka oo la kulmay Hogaamiyaha K/Galbeed:-(Sawiro)
Guddiga KMG ah ee diyaarinta Sharciga doorashooyinka dalka oo safar ku jooga Magaalada baydhabo ee Xarunta gobolka Baay ayaa waxaa ay xalay kulan la qaateen Hogaamiyaha Maamulka K/Galbeed iyo Xildhibaannada Maamulkaas. Kulanka ayaa waxa uu ahaa mid ay uga wadatashanayeen diyaarinta Sharciga doorashooyinka, iyada oo guddiga shalay markii ay halkaasi tageen ay la kulmeen Gudodomiyaha […]
Weerar khasaaro geystay oo ka dhacay Mareykanka:-(Sawiro)
Magaalada Taariikhiga ah ee Philadelphia ee dalka Mareykanka waxaa shaley galab ilaa xaley ka socdey toogasho iyo weerar dhex marey dabley hubaysan iyo ciidmada Booliiska dalkaas oo isku dayaya inay ka hortagaan kooxaha weerarka soo qaaday Inta la xaqiijiyey 6 ka mid ah ciidamada booliiska ayaa la dhaawacay, waxaana dableydan ay wadeen muddo saacado ah […]
Ramaphosa: Mashaakilka kufsiga waa in xaalad degdeg ah loo aqoonsado
Toogasho 2-aad oo aan kala sooc lahayn oo ka dhacday Mareykanka 24 saac gudahood
Posted on August 4, 2019 August 5, 2019 Author Hareerley News	Comment(0)
Wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha K/Galbeed Oo Daahfurey Madasha Shaqa Abuurka Maamulka K/Galbeed:-(Sawiro)
Posted on August 9, 2019 August 9, 2019 Author Hareerley News	Comment(0)